Wasiirkii arrimaha dibadda Noorweey muxuu kala hadlay dowladda Soomaaliya? | Somaliska
Wasiirka Arrimaha Arrimaha Dibedda dalka Noorweey Børge Brende, booqasho ku tagay magaaladda Muqdisho maalintii shalay aheyd. Booqashada wasiirka oo aheyd hal maalin ayaa ra’iisal wasaare la kulmay, waxaana ay labadda mas’uul ka hadleen xirriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Noorweey.
Hadal ay labadda mas’uul siiyiin saxaafadda ayaa Mudane Kheyre sheegay inuu soo dhaweeynayo sida ay Noorweey diyaar ugu tahay da daalada lugu doonayo in lagu xasilinayo dalka.
“Booqashada uu noogu yimid Wasiirka Arrimaha Dibedda Noorweey, waxay cadeynaysaa horumarka ballaaran ee la sameeyey afartii bilood ee la soo dhaafay oo sii jiitay indhaha caalamka, waxaan isla soo qaadnay arrimo muhiim ah oo wax tar u leh dalkeena, iyaguna waxay qireen in Soomaaliya ay u heelan tahay sidii ay uga faaiideysan lahayd taageerada uu caalamku siiyo”ayuu yiri ra’iisal wasaare Kheyre.
Børge Brende oo ah wasiirka arrimaha dibadda Noorweey oo dhankiisa ka hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay imaantinkiisa Soomaaliya iyo waxa uu ku sheegay sida wanagasan ee loo soo dhaweeyey, wuxuu sheegay oo kale in uu doonayo in la xoojiyo xirriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Noorweey. Wuxuu guul iyo talaabo horumarineed ku tilmaamay isbadalka dowladda ay ka sameeyasay dhinacyo badan muddadii afarta bilood aheyd ee ay jirtay.
Waxaa kale uu wasiirku sheegay in dowladiisa ay sii wadeeyso taageerada ay siiso Soomaaliya gaar ahaan arrimaha amniga dib u heshiisiinta iyo dhismaha hay’adaha dawladda.. Wasiirka ayaa cagtiisi ugu dambeeysay ku soo xiray kulan uu la qaatay madaxweynaha dalka Maxamed C/laahi Farmaajo.
Ugu dambbeyntiina Noorweey waxaa ay ka mid tahay dalalka muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool ay dhibbaatooyin kala kulmaan qaarkood, sida in carruuro laga qaato loona diido sharciyada qaarkood. Booqashada wasiirka ayaa aheyd mid aan dhaafsiisaneeyn booqasho caadi ah oo aan ka duwaneyn kuwii hore uu dalka ugu tagay. Mana jirto wax cad oo ay isla meel dhigeen dowladda Soomaaliya gaar ahaan dhinaca dib u celinta qaxootiga soomaalida Noorweey ee sharciyda loo diido.